Home - Cele Gabar
” (၁၀ )သိန်းတန်ဖိုးရှိ ပိုက်ဆံပန်းစည်းကြီးနဲ့ မိခင်ကြီးကို သီတင်းကျွတ် ဂါဝရပြုကန်တော့ခဲ့တဲ့ ဒီဇိုင်နာမျိုးမင်းစိုး”
” ရေမွန်ရဲ့ ၄ လပြည့်မှာ သတိတရနဲ့ လွမ်းဆွတ်ကြေကွဲပေးသူအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်စကားဆိုလိုက်တဲ့ ရေမွန်ရဲ့မိခင် ဒေါ်ခင်မြတ်မွန်”
“အနုပညာအလုပ်တွေအတူတူတွဲလုပ်ခဲ့တဲ့ လူရွှင်တော်ကြီးဦးစံမိုးကို သွားရောက်ဂါဝရပြုခဲ့တဲ့ လူရွှင်တော်မိုးစက်”
” စားဝတ်နေရေးကျပ်တည်း​နေကြတဲ့ကာလမှာ အခြေခံလူတန်းစားတွေအတွက်တစ်နိုင်တပိုင်အလှူ​ေလး ကိုယ်တိုင်သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့သင်ဇာဝင့်ကျော်”
” ပရိသတ်တွေမျှော်လင့်ထားသလို ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံထားရခြင်းမှ လွတ်မြောက်လာခြင်းမရှိသေးတဲ့ အနုပညာရှင်များ ”
ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရချိန်မှာတောင် သူ့အတွက်သီတင်းကျွတ်မုန့်ဖိုး မဖြစ်မနေပေးပေးဖို့ မန်နေဂျာကိုမှာခဲ့တဲ့ ပိုပိုရဲ့အကြောင်းကို ဝမ်းနည်းစွာနဲ့ ရင်ဖွင့်လာခဲ့တဲ့ အဆိုတော် Orchid
ပိုင်ဖြိုးသုကတော့ လက်ရှိအချိန်မှာအောင်မြင်ကျော်ကြားနေတဲ့မြန်မာမင်းသမီးတွေထဲကတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာလည်း ပရိသတ်တွေရဲ့အသိအမှတ်ပြုမှုကို ရရှိထားတာပါ။ …
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့နာမည်ကျော်တွေဖြစ်သလို မြန်မာပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုရရှိထားတဲ့ Ji Chang Wook …
CeleGabar ပရိသတ်ကြီးရေ ခိုင်နှင်းဝေကတော့တစ်ခတ်တစ်ခါကလည်း ပါးချိုင့်လေးနဲ့ ချစ်စရာကောင်းပြီး …
အခုအချိန်မှာတော့ ကိုဗစ်အတွက် ကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲထားတဲ့ပန်းချီကားချပ်တွေကို အနုပညာရှင်တော်တော်များများကလှူဒါန်းခဲ့ကြတာပါ။ ဝယ်ယူအားပေးသူတွေရှိခဲ့ကြပြီး …
CeleGabar ပရိသတ်ကြီးရေ ခိုင်နှင်းဝေကတော့ ပရဟိတမင်းသမီးတစ်လက်လို့ပရိသတ်တွေ သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်း …
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံက မော်ဒယ်လ် တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော် Sinon …
ပရိသတ်ကြီးရေ ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ Joox မှာ ပရိသတ် နားဆင်မှုအများဆုံးနဲ့ နံပါတ်(၁)နေရာကိုတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် ဘင်ဂျမင်ရဲ့ “ပြန်တွေ့မယ့်ရက်” သီချင်းလေးကပဲ သိမ်းပိုက်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်ကလည်း ဘင်ဂျမင်ရဲ့ သီချင်းလေးက နံပါတ်(၁)နေရာကို ရရှိထားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဒီတစ်ပတ်နဲ့ဆို နှစ်ပတ်ဆက်တိုက် နံပါတ်(၁)နေရာကို ရရှိထားခဲ့တာပါ။ “ပြန်တွေ့မယ့်ရက်” သီချင်းလေးကတော့ ဘင်ဂျမင်ရဲ့ ပထမဆုံး ကိုယ်ပိုင်သီချင်လေး ဖြစ်ပြီး သီချင်း အမြည်းလေးထွက်ရှိလာကတည်းက ပရိသတ်တွေ သဘောကျနေခဲ့တဲ့ သီချင်းလေးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ထွက်ရှိလာချိန်မှာလည်း ပရိသတ်တွေ အားခဲထားခဲ့သလို အကြိုက်နဲက ထပ်တူကျပြီး ရင်ထဲကို ရောက်ခဲ့တဲ့ သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး လက်ရှိအချိန်မှာလည်း ပရိသတ်နားဆင်မှုအများဆုံး နံပါတ် (၁)နေရာကို နှစ်ပတ်တိတိ ဆက်တိုက် သိမ်းပိုက်ထားနိုင်ခဲ့ပသေးတယ်။ CeleGabar …
World Music Day အထိမ်းအမှတ် Live မကြည့်လိုက်ရတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် Live မှာဆိုခဲ့တဲ့သီချင်းလေးတစ်ပုဒ် တင်ပေးလိုက်တဲ့ အိမ့်ချစ်
နိုင်ငံကျော်အဆိုတော် အိမ့်ချစ်ဟာ ယနေ့မှာတော့ ဇွန်လ(၂၁)ရက်မှာကျရောက်ခဲ့တဲ့ World Music Day အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ မနေ့ကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ JOOX မှာလွှင့်ခဲ့တဲ့ Live မကြည့်လိုက်ရတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် Live မှာဆိုခဲ့တဲ့ထဲက သီချင်းလေးတစ်ပုဒ် ဖြစ်တဲ့ Mr.Busy သီချင်းလေးကို ပရိသတ်တွေနားဆင်ရအောင် ပြန်လည်ဝေမျှထားပါတယ်။ အိမ့်ချစ်ကတော့ JOOX World Music Day 2020 ဖျော်ဖြေပွဲဖြစ်တဲ့ “The Sound of Happiness” ဆိုတဲ့ Live ထုတ်လွှင့်မှုမှာတော့ ပြည်တွင်အဆိုတော်တွေဖြစ်တဲ့ ဝေလ၊ Big Bag၊ ဖြူဖြူကျော်သိန်း၊ ရွှေထူး၊ အိမ့်ချစ်၊ ဖြိုးပြည့်စုံ၊ မေ နှင့် ချမ်းမြေ့မောင်ချိုတို့နဲ့အတူ ပါဝင်ဖျော်ဖြေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာ World Music …
မေမြို့မှာ သီချင်းအသစ်တစ်ပုဒ်အတွက် ရိုက်ကူးရေးသွားလုပ်နေတဲ့ G Fatt
ပရိသတ်ကြီးရေ လူငယ်တွေကြားမှာ အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် အဆိုတော် G fatt ကတော့ လတ်တလောမှာ မေမြို့ဘက်ကို ရောက်ရှိနေပါတယ်။ မေမြို့ဘက်ကိုရောက်နေရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကတော့ G Fatt က မေမြို့ဘက်မှာ သူ့ရဲ့ သီချင်းအသစ်လေးအတွက် ရိုက်ကူးရေးတွေသွားရောက်လုပ်ကိုင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သီချင်းလေးကတော့ “အိပ်ယာဝင်ပုံပြင်” ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးဖြစ်ပြီး သီချင်းရိုက်ကူးရေးကို မေမြို့ဘက်မှာသွားရောက်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ အကြောင်းကို “ကျွန်တော် ဒီရက်ပိုင်း မှာ “အိပ်ယာဝင်ပုံပြင်” ဆိုတဲ့ သီချင်း အသစ်တစ်ပုဒ်ကို မေမြို့ ဘက်မှာ သွားရောက် ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်” ဆိုပြီးG Fatt က သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ သူ့ရဲ့ ပရိသတ်တွေ သိရှိရအောင် ဖော်ပြထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ G Fatt …
နိုင်ငံကျော်အဆိုတော် လွှမ်းပိုင်ကတော့ လူငယ်အဆိုတော်တွေထဲမှာ Shine ကြိုက်နှစ်သက်ရတဲ့ Artist တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကို “Shine ဟာကျွှန်တော်သိထားတဲ့လက်ရှိ လူငယ် Artist တွေထဲမှာ Talent အပြည့်ရှိတဲ့လူငယ်တယောက်ပါ။ပြည်တွင်း Artist တွေထဲမှာ Different one Musicလို့သူပြောသလိုပဲတကယ်ကို Different ဖြစ်ပြီးကျွှန်တော်ကြိုက်နှစ်သက်ရတဲ့ Artist တယောက်ပါ။ သီချင်းရေးတဲ့တေးရေးတော်တော်များများသိပါတယ် အချစ်သီချင်းရေးရတာ/အပျော်သီချင်းရေးရတာ လွယ်ပေမဲ့ မိဘ/သူငယ်ချင်း/အစရှိသောသံယောဇဉ်ကိုဖော်ကြူးတဲ့ သီချင်းတွေရေးရတဲ့အခါတော်ရုံတန်ရုံနဲ့တဖက်သူရင်ထဲရောက်အောင်ရေးဖို့မလွယ်သလိုတေးရေးသူကလဲတကယ်ရင်ထဲကခံစားချက်အပြည့်နဲ့ရေးမှရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီသီချင်းကိုတော့ Shine ကလုံးဝနားထောင်သူရင်ထဲရောက်အောင်ရေးနိုင်ရုံတင်မက တေးသံစဉ်ကလဲအများထင်သလိုဆွေးနေတဲ့သံစဉ်မျိုးမဟုတ်ပဲဆွေးသွားအောင်ဖန်တီးနိုင်တဲ့သူ့ အနုပညာကတော့တော်တော်ကြမ်းလွန်းလို့ဒီစာနဲ့ကျွန်တော်ဂုဏ်ပြုချင်ပါတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဒီလိုတော်တဲ့အနုပညာရှင်လက်သစ်တွေကို Media များ ပရိတ်သတ်များအနေနဲ့များစွာ Support လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။အားပေးပါ တန်ဖိုးထားပါ ဒါတကယ့် အနုပညာရှင်အစစ်ပါ!!” လို့ သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာမှာ Shine ရဲ့ အစ်ထွက်ရှိထားတဲ့ “၁၉၉၀” သီချင်းသစ်လေးကို Share …
ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် မူးလာကတော့ မနေ့က ဇွန်လ (၂၁)ရက်နေ့မှာ ကျရောက်ခဲ့တဲ့ အဖေများနေ့မှာ သူကရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကို ဂုဏ်ပြုတဲ့ အနေနဲ့ သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကို သီဆိုပြီး သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေဖော်ပြလာခဲ့ပါတယ်။ သီချင်းလေးကတော့ ဇော်ဝင်းထွဋ်နဲ့ အီတိုးတို့ သီဆိုထားတဲ့ “ပဲ့ကိုင်ရှင်” သီချင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ မူးလာကတော့ သီချင်းသီဆိုထားတဲ့ ဗီဒီယိုလေးနဲ့ အတူ ဖခင်ဖြစ်သူအတွက် “Happy Father’s Day. သားဆိုးတယောက်ရဲ့ အဖေအတွက် အမှတ်တရလေးပါ။ အမြဲ မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်ပေးပြီး အဖေကောင်းတယောက်အဖြစ် စံပြရှိနေပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်လျှက်။ Love you အပါး” ဆိုပြီး အဖေများနေ့မှာ ဖခင်ကို ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောထားပါသေးတယ်။ မူးလာရဲ့ ပရိသတ်တွေကတော့ မူးလာတစ်ယောက် “ပဲ့ကိုင်ရှင်” သီချင်းလေးနဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူအချစ်ပိုရအောင် ချွဲနေတယ်လို စနောက်နေကြပါသေးတယ်။ …